लण्डन, १४ असार । बेलायतका प्रत्येक विद्यालयमा विशेष सुरक्षा मापदण्ड लागू गरिने भएको छ । यसका लागि पहिलो चरणमा विद्यालय छिर्नुअघि उनीहरुले चक्कु बोके नबोकेको पत्ता लगाउने उपकरण जडान गरिने भएको छ ।
मदन भण्डारीको ६६औं जन्मजयन्ती: भण्डारीको निर्वाचन विशेष चर्चित भाषण (भिडियोसहित)
ननेता मदन भण्डारीको जन्मदिन र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएपछिको स्थानीय तह निर्वाचन एकैदिन पर्नु संयोग मात्रै होला ।
अनस्क्रिन आमाभन्दा धेरै वर्षले जेठा छन् यी बलिउड हिरोहरु
बलिउड–बलिउडका केही यस्ता भुमिकाहरु रहेका हुन्छन् जसबारे तपाईले थाहा पाउनु भयो भने आश्चर्यमा पर्नुहुनेछ । फिल्ममा आमाको भुमिकामा देखिएका कलाकारहरु देख्दा लाग्छ यिनीहरु धेरै नै वर्षका भइसकेका छन् ।
मृत्युपछि मान्छेको शरिरमा हुन्छ यस्तो अचम्म लाग्दा ७ परिवर्तन
लक्ष्मी बैंकको सोह्रौं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न, ३८ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
काठमाडौं, असार १४ । लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको सोह्रौं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ ।
चिली भर्सेस पोर्चुगलः कुन देश पुग्ला कन्फेडेरेशन कपको फाइनलमा ?
एजेन्सी, १४ असार । आज राति फिफा कन्फेडेरेसन कपको सेमिफाइनल खेलमा पोर्चुगल र चिली आमने सामने गर्दैछन् । कोपा अमेरिकन कप जितेको चिली र युरो कप जितेको पोर्चुगल बलिया प्रतिस्पर्धी मानिन्छन् । दुवै टोलीका प्रशिक्षकले फाइनलको यात्रा तय गर्ने बताएका छन् ।
बिहान ११ बजे नै सकियो मतदान, ९३ प्रतिशत मत खस्यो
बाजुरा, असार १४ । हिमाली गाउँपालिका–१ मा बिहान ११ बजे नै मतदान सकिएको छ ।
बलिउडका कुनै समयका चर्चित ८ अभिनेत्रीहरु हाल यस्ता देखिन्छन्
बलिउड–बलिउडका केही यस्ता अभिनेत्री रहेका छन् जो पारिवारिक जीवनमा रमाइरहेका छन् ।
युएईका राजदुतले दिए यस्तो धम्की, अब के गर्छ कतार ?
एजेन्सी– साउदी अरब, युएइ लगायत अन्य राष्ट्रहरुले कतारमा लगाएको नाकाबन्दी जारी रहेको छ । कतार संकट सुल्झाउन केही देशहरुले पहल पनि गरिरहेका छन् । पछिल्लो पटक साउदी अरबले १३ बुँदे सम्झौता प्रस्ताव प्रस्तुत पनि गरेको थियो तर कतारले उक्त प्रस्ताव ठाडै अस्विकार गरिदिएको थियो ।
मतपत्र जलाइएपछि मतदान स्थगित
लिवाङ, असार १४ । मतपेटिकाभित्र एसिड हालिएपछि रोल्पा नगरपालिका वडानम्बर १० को मतदान स्थगित भएको छ । एक मतदाताले भनभने मतदान केन्द्रको बुथ ‘ख’को मत पेटिका भित्र एसिड हालिदिएका हुन् ।
Page 1641 of 3762